IGran Turismo Sport yePS4 ngoku iyafumaneka | Iindaba zeGajethi
IGran Turismo Sport yePS4 ngoku iyafumaneka
Kwiminyaka yakutshanje iGran Turismo uye waba ngumlinganiso oza kuwulandela xa uthetha ngokulinganisaIiSimulators eziqale ukuvuselelwa ngokusungula iinguqulelo ezintsha zezinye iikhonsoli ezinje ngeMotorsport 7 okanye iiMoto zeProjekthi. unxibelelwano lwe-intanethi, siya kuba nakho ukonwabela isekethe ezimbalwa.
IGran Turismo Sport ayisiniki manani afanayo ngokweesekethe kunye nenani lezithuthi onokukhetha kuzo njengeminye imidlalo, Zili-140 izithuthi kunye neesekethe ezili-17, egxile ekuzameni ukusinika eyona simulator yokuqhuba yokwenyani. Ukuqala ukufumana le nguqulo yesine, sineeklasi ezingama-24 zokuqhuba esinazo ukuze siziqhelanise nomdlalo kunye neemoto, kunye nemishini engama-64 ekufuneka siyiphumelele ukubonisa ukuba silungile ngenene kwaye sikwazi ukuthatha inxaxheba. Imowudi yezemidlalo, ngaba umdlalo ujolise ngokwenene okanye kufuneka sizinikele kwenye into.
Umphuhlisi uhlawula ugxininiso olukhethekileyo kumdlalo olungileyo ukuze umkhondo uphume ukuze unciphise amagophe okanye ukubetha ukuthatha abo baphikisayo kwingoma kuya kusihlwaya. Umgangatho ocacileyo walo mdlalo awunanto iphikisayo ngaphandle kokuba sithathela ingqalelo ukuba umphuhlisi Khange azikhathaze ngokubonisa ukonakala kwezithambiso okubangelwe yindlela yethu yokukhwela, ke ukuba sithe sabetha eludongeni, ubuhle bemoto abunakukhathazeka. Lo mbandela uhambelana xa ulungiselela izithuthi zethu, ukhetho oluye lwasuswa ngokupheleleyo, ngokutsho komphuhlisi, ukukhuthaza ukhuphiswano phakathi kwabo bonke abasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iiconsoles » IGran Turismo Sport yePS4 ngoku iyafumaneka